Ogaden News Agency (ONA) – Faah Faahin Dheeraad Ah oo Kusaabsan Weerarkii Hotel SYL ee Muqdisho.
Faah Faahin Dheeraad Ah oo Kusaabsan Weerarkii Hotel SYL ee Muqdisho.
Faahfaahin kasoo baxaysa weerarkii ka dhacay magaalada Muqdisho ee lala doonaayey Hotel SYL ayaa sheegaysa in qaabka wax u dhaceen iyo qorshaha al-Shabaab wax weyn iska bedalay.
Wararku waxay sheegayaan in qorshaha al-Shabaab ahaa in ay qabsadaan Hotel SYL oo ay deganaayeen Diblomasiiyin, Xildhibaano, masuuliyiin ka tirsan dowladda. Hotelka ayaa iska leh meel dadka lagu baadho oo ciidanka NISA ay ilaaliyaan.
Wasiirka Amniga Soomaaliya Cabdirisaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in qaraxa kowaad uu ahaa mid aad u culus, waxaana ay argagixisadu doonayeen in uu dumu darbiga wayn ee Hotelka si ay gudaha ugu galaan. Qaraxaas waxa uu dimiyey guryihii laamiga saarnaa, Waxaana ka mid ahaa dadkii ku geeriyoodey laba ka mid ah ciidankii NISA ee ku sugnaa Isbaarada kadib waxaa xigey afar nin oo kamid ah Argagixsada in ay kasoo degeen gaadhiga labaad ee qaraxu ka dhacay ee la dhigey meel Hotelka ka fogeyn, kadibna ay isku dayeen in ay Hotelka soo weeraraan, waxaana isla goobtaas ku diley ciidankii waardiyaha ka hayey Hotel SYL.
Qaraxa gaadhiga 1aad, ayuu sheegay Wasiirka Amnigu in uu ahaa mid aad u culus oo ka weyn qaraxii Hotel al-jazeera loo adeegsadey oo gaaraya 150kg, kaasoo lagu soo raray gaari nooca xamuulka ah, Qaraxa xalay ka dhacay agargaarka hotel SYL ayuu sheegay in laamaha amniga iyo khubarada ajaanibta ah ee la shaqeysaa ay sheegayaan in uu gaarayey 200kg.
Ilaa hadda tiro rasmi ah masoo bixin oo ku saabsan dadka ku geeriyooday, waxaa Isbitaalada lageeyey tobonaan qof oo qaba dhaawacyo kala geddisan, halka dad ka badan 20 qof ay ku geeriyoodeen sida ay sheegayaan dad indhahooda ku arkey. Waxaa ku dumey guryo aad u badan oo ku yaala wadada ay Ex-Fiyoora. Weerarkan waxaa sheegtey al-Shabaab. Inkasta oo aysan ku guuleysan in ay gudaha u galaan Hotel SYL .